Daacuun ka dillaacay Zambia - BBC News Somali
Daacuun ka dillaacay Zambia
30 Disembar 2017
Hooyo iyo ilmaheeda oo daacuun uu ku dhacay dalka Zambia sannadkii 2004
Madaxweynaha Zambia Egar Lungu ayaa milateriga iyo booliska amar ku siiyey inay gacan ka gaystaan sidii wax wax looga qaban lahaa cudurka daacuunka oo ka dillaacay caasimadda waddankaas ee Lusaka.
Seddexdii bilood ee u dambeeyey ayuu daacuunku dilay 41 qof.
Dadka uu daacuunku dilay ka sokow, waxaa isbitaallada la jiifay ilaa 1500 oo qof tan iyo Sitembar.
Xanuunku wuxuu dillaacay 28 Sitembar, laakinse wuxuu u muuqday mid waxoogaa soo yara degay 20kii Oktoobar, ayadoo todobaadkiiba la soo sheegayey in dhowr qof oo shan ka yar uu soo ridanayey ilaa laga soo gaaray 5tii Nofembar.
Tirada dadka uu ku dhacay ayaa markaa ka dib cirka isku shareertay, ayadoo gaartay ilaa 136 qof todobaadkiiba wixii ka billowday 26 Nofembar, sida ay ku warrantay hay'adda caafimaadka adduunka.
Afhayeenka madaxtooyada, Amos Chanda, ayaa hadal la soo saaray galinkii dambe ee Jimcaha wuxuu ku sheegay in madaxweynuhu rumaysan yahay in loo baahnaa in la qaado tallaabooyin gurmad degdeg ah si loo xakameeyo xanuunkan biyaha ku fida, kuwaasoo ay u jiraan in la xiro suuqyada qaarkood.
Markii hore ayaa xanuunka wuxuu ku ekaa qaybaha ay dadku aadka u deggan yihiin ee magaalada Lusaka, meelahaas oo sixadoodu ay liidato, uuna si sahlan cudurku ugu faafi karo, sida uu chanda sheegay.
Waxaa lala xiriirinayaa inuu markii hore ka dhashay biyo washakhaysan oo laga soo dhaamiyey ceelal aan gun dheerayn, laakin baaritaanno la sameeyey ayaa daboolka ka qaaday in fiditaanka daacuunka ay sidoo kale qayb ka qaateen raashin aan nadiif ahayn sida uu sheegay afhayeenka.
Chanda wuxuu sheegay in dhamaanba suuqyada, baararka, makhaayadaha iyo goobaha kale ee bulshadu ku kulanto, ee keeni kara khatarta ah in cudurka la isku gudbiyo la xiri doono, ilaa iyo inta ay goobahaas ka noqonayaan kuwo ka soo baxa shuruudaha xagga fayo dhowrka.
Muuqaal, Farmaajo iyo Rooble oo heshiiyay - Maxay isku raaceen? - Muuqaal
Kulanka Farmaajo iyo Rooble - iyo inta jeer ee arrimo ay isku khilaafeen
Ninkii Soomaaliga ee loo haystay dilka xildhibaanka UK oo dacwad rasmi ah lagu soo oogay
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: 11 Jannaayo 2021
Tuug taleefan uu dafay si lama filaan ah live uga soo galay
Dhowr sababood oo aan loo xusi karin dhalashada Nebiga CSW--- Sheekh Zakir Naik